Kheyre oo iska difaacay arrin ay ku eedeeyen Siyaasiyiinta Mucaaradka | TOP NEWS
Kheyre oo iska difaacay arrin ay ku eedeeyen Siyaasiyiinta Mucaaradka
By Tifaftiraha Somalida Maanta on June 10, 2017 No Comment
Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre ayaa shaaca ka qaaday inuu aad uga xun yahay in Siyaasiyiinta qaar ay ku dhaliilan howlaha uu u hayo Qaranka.
Ra’isul wasaaraha ayaa sheegay inuu dhaliil ku muteystay la socodka howlaha ka socda Xarumaha dowlada, waxa uuna tilmaamay inuu mas’uul ka yahay la xisaabtanka mas’uuliyiinta dowlada ee ku magacaaban xarumaha dowlada.
Kheyre waxa uu tilmaamay in Siyaasiyiinta qaar ay aad uga soo horjeedan in lala socdo shaqooyinka ka dhex socda xarumaha dowlada, waxa uuna taa bedelkeeda sheegay inuu laba jibaarayo booqashooyinka iyo la xisaabtanka madaxda dalka ee lagu aaminay hantida Qaranka uu leeyahay.
”Waxaa iga go’an inaan hal hal ula socdo shaqooyinka ay hayaan madaxda iyo shaqaalaha dowlada, waxaa mas’uul iga saaran inaan si cadaalad ah ugu shaqeeyo dalka weyna sii socon doonaan booqashooyinka xarumaha dowlada”
Kheyre waxa uu ku baaqay inaan lagu degdegin dhaliilaha loo jeedinaayo dowlada, waxa uuna carab dhabay inay ka miro dhalinayaan howlaha ay u hayaan Qaranka, iyadoo aan lagu xadgudbi doonin cid gaara.
Dhawaanahani ayaa waxaa soo baxayaay Siyaasiyiin dhaliilo kala duwan u jeedinaaya Ra’isul wasaaraha Xukuumada oo inta badan wakhtigiisa galiyay booqashooyinka Xarumaha dowlada iyo la socodka shaqooyinka.
Kheyre oo iska difaacay arrin ay ku eedeeyen Siyaasiyiinta Mucaaradka added by Tifaftiraha Somalida Maanta on June 10, 2017